Ma heli kartaa cunto si ku meel gaar ah? - Cuntooyinka giraangiraha
Cunto ma ku heli kartaa ku meel gaar?
Cunto karintu ma aha mid ka mid ah howlaha ay ugu jeceshahay Marsha Oliver, laakiin waxay si farxad leh u aqbashay mas'uuliyadeeda iyada oo ah kuugga madaxa qoyskeeda. Si kastaba ha noqotee, waa hawl ay u baahan tahay labada gacmood si ay u fuliso, iyo markii ay qalliinka garabka ku jirtay bishii Ogosto, waxay si ku meelgaar ah uga fogeysay jikada.
Marsha waxay sameysaa dhamaan karinta gurigeeda maxaa yeelay ninkeeda Rolf sharci ahaan waa indhoole. Markii ay awoodi weyday inay gudato waajibaadkeedii caadiga ahaa, Marsha waxay ogaatay in caawimaaddu ay tahay oo keliya taleefan la soo diro. Markay Marsha ka soo kabsatay qalliin, lamaanaha Arden Hills waxay haysteen cunno maalinle ah oo laga keenay Cunnada Wheels. Markay dhowr toddobaad qaadatay soo kabashada, Marsha waxay mar labaad diyaar u ahayd inay ku noqoto noqoshada cunnada ugu weyn ee qoyska.
In kasta oo qaar badani ay si sax ah uga fikiraan Cunnooyinka Lugaha Lugta sida xalka muddada-dheer ee ka caawiya dadka qaata inay si madax-bannaan ugu noolaadaan guryahooda, haddana cuntooyinka sidoo kale waxaa lagu heli karaa muddo-gaaban. Cunnooyinka Lugaha La Siiyaa waxay fursad weyn u tahay kuwa ka soo kabanaya dhacdo caafimaad, maaddaama cuntooyinku ay bixiyaan nafaqo fure u ah soo kabashada caafimaadka leh. Ama, sidii xaalku ahaa Marsha, cunnooyinka guriga la geeyo waxay noqon karaan wax weyn caawimaad haddii xaddidaadaha jireed ee la xiriira dib u soo kabashadaada ay la kulmaan caqabado xagga karinta ah.
Ma jiraan wax si weyn ugu tartamaya karinta guriga, laakiin Marsha waxay sheegtay in cunnooyinka dhameystiran ee ay bixiyaan Cunnada Wheels ay tahay ikhtiyaar kumeelgaar ah oo kumeelgaar ah, iyada oo la tixgelinayo qalliinka ayaa sidoo kale ka hor istaagay in ay baabuur waddo si ay meel kale cunto uga soo qaadato. "Waxaan kaliya si toos ah uga fikiray Cunnada Wheels-ka oo qayb ka ah xalka," ayay tiri Marsha.
Bishii Ogosto ee la soo dhaafay, Marsha waxay sidoo kale u jeesatay Cunnada Wheels si looga caawiyo dhacdadii caafimaad. Waxay gashay qalliin qalafsan 2009-kii Olivers-na waxay heshay cunno muddo lix toddobaad ah inta ay bogsatay. Waxay ku qaddarisaa Cunnada on Wheels iyada oo ka caawisay iyada inay ku soo laabato caafimaadka si dhakhso leh si iyada iyo Rolf ay ugu baxaan fasaxa Talyaaniga sannadka 2010.
Haddii adiga ama qof aad taqaanid ka faa'iideysan karaan helitaanka cuntada, ku meelgaar ah ama haddii kale, wax badan ka baro helitaanka cuntada ama saxiix si aad u hesho cunto khadka tooska ah Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid helitaanka cuntada, naga soo wac lambarka 612-623-3363.
Maarso 19, 2014